क्यामेरमा के देख्नुहुन्छ?
Kemer टर्कीमा एक आधुनिक प्रसिद्ध रिसोर्ट हो। यो सानो शहरमा त्यहाँ धेरै स्थानहरू छन् जहाँ मानिसहरू आफ्नो खाली समय स्थानीयहरू र आगन्तुकहरू र टेलिभिजनमा खरीदारीका प्रेमीहरू पनि मनपर्छ। त्यसैले पनि संदेह छैन, तपाईं सँग केहि गर्न हुनेछ र Kemer मा छुट्टी को लागि जहाँ जान्छ। र हामी सुनेको छु कि टेलिभिजनबाट ल्याउन, स्मृति चिन्ह र उपहारहरूको अलावा, किनकि सुन्दर ठाउँहरूबाट छापहरू र भावनाहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन्।
के के गर्न र क्यानर र यसको उपनगरमा जाने कहाँ छ?
यो क्यानरको केन्द्रीय वर्ग हो, जहाँ सेतो ढुङ्गाबाट घडीको साथ एक पुरातन टावर छ, जुन शहरको एक प्रकारको प्रतीक मानान्छ। त्यहाँ आधुनिक टर्कीको संस्थापक र यसको पहिलो राष्ट्रपति - मस्जिद कामाल अटटोर्कको स्मारक पनि छ। यसबाहेक, हालैमा बेलौला सुन्दर नृत्य फव्वारे र थुप्रै अन्य असामान्य स्मारकहरूसँग सजाय गरिन्छ। यहाँ यो सँधै शोर र भीड हुन्छ: मान्छे हिड्छ, मेमोरीका लागी तस्विर लिनुहोस्, भ्रमणका मार्गहरु को अधिकांश यहाँ सुरु हुन्छ।
यो Kemer शहरको अर्को आकर्षण हो, जुन निश्चित रूपमा तपाइँलाई बेपत्ता छैन। पार्क Yoryuk शहर को केन्द्र को एक खूबसूरत क्षेत्र मा खुला हावा मा स्थित छ। यो संग्रहालयले तपाईंलाई टर्कीको कोमाडिक मान्छेहरूको संस्कृति, जीवनको मार्ग र जीवनको बारेमा अझ बढी सिक्न अनुमति दिन्छ साथै साथमा आपतकालीन टर्कीको व्यंजन स्वाद गर्न सक्नुहुन्छ।
यो Kemer मा सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ मध्ये एक छ, जसका खंडहर समुद्र तट मा बाटो मा जंगल मा स्थित छ। तपाईं यहाँ विशाल स्तम्भहरू देख्नुहुनेछ कि टाढाको अतीतमा स्थानीय चर्च, प्राचीन स्नान, Lycian कब्रहरू र धेरै संगमरमर फौजरी प्लेट्स को सजावटको रूपमा सेवा गरियो। यो ठाउँले पुरानो समयको वातावरण र समयको आत्मालाई मात्र कैद गर्दछ। Kemer मा यो अचम्म र कम रोचक ठाउँहरूमा समाप्त हुँदैन।
ओलमोमोजबाट टाढा सर्कलीको गाँउ हो। त्यहाँ त्यहाँ छ भनिन्छ "जलने पहाड" यानटाटाश स्थित छ। प्राकृतिक ग्याँसको रिहाईको परिणामको रूपमा, तपाईं कसरी आगो लगाउन जलाउन सक्नुहुन्छ। पुरातन किंवदंतियों को अनुसार, धेरै हज़ार साल को लागि प्रकृति को चमत्कार गरिएको छ र एक पल्ट नेभिगेटरहरु को लागि एक गाइड को रूप मा पनि कार्य गरे।
यो कमर क्षेत्रमा स्थित अर्को गाँउ हो र यो सबैभन्दा ठूलो पर्यटक केन्द्र हो। यहाँ तपाईं 1958 मा पत्ता लगाइएको पुरातन गुफा देख्न सक्नुहुन्छ। गुफाको पर्खालहरूमा, प्रागैतिहासिक व्यक्तिहरूको चट्टान नक्कल संरक्षित गरिन्छ। यसको अतिरिक्त, त्यहाँ वैज्ञानिकहरूले पुरातन औजार र दुर्लभ कलाकृतिहरू फेला पारेका छन् न्युलिथिक र पर्ललिथिक समय, जुन संग्रहालय मध्ये एकमा भण्डारण गरिन्छ।
यो कमरको आसपासको एक गाँउ हो, जहाँ तपाइँ वास्तवमा के देख्न सक्नुहुनेछ। यो यहाँ छ कि सबैभन्दा सुन्दर क्यान्सर अवस्थित छ। यो एक ठूलो किला 14 किमी लामो, जुन गहिरो पर्वत वाल्लेहरूको अनियमितनीय परिदृश्य धेरै गुजारा र झरना संग छ। असंख्य संख्याको विभिन्न मार्ग, पुल र मार्गहरूको लागि धन्यवाद, अज्ञात वन्यजीवको रहस्यमय वातावरण सिर्जना गरिएको छ, जसले लामो समयदेखि पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरेको छ।
केमरमा अरू के तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ?
Kemer मा आराम गर्दै, तपाईं तख्तला माउन्टेन, टर्कीको दक्षिणी तटमा उच्चतम बिन्दुमा उत्प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ जुन 2365 मीटर को उचाई पुग्छ। यस अविस्मरणीय भ्रमणको समयमा, तपाईं साथसाथै पर्वतको माथिल्लो तातो समुद्री र स्याउको हिउँद प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, केमेर बाट तपाईं एक जीप सफारीमा पहाडहरूमा बसोबास गर्न सक्नुहुनेछ वा बस शहरको अद्भुत बाह्य माध्यमबाट गधा-सफारीमा। साथै, नौका, राफ्टिंग, डाइविंग, साधारण माछा माछा मार्ने वा भ्रमण गर्ने पानीको भ्रमणमा दिन वा रात पैदल यात्रा एक अविलम्ब प्रभाव छोड्ने छ।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो एक ठूलो शहरमा धेरै सुन्दर ठाउँहरू छन्, तर यो Kemer मा रोचक र आकर्षक सबै देख्न सक्दैन।
सेन्ट पीटर्सबर्गको निःशुल्क संग्रहालय
अक मस्जिद, नाबोरेनी चेल्नी
उल्यानोस्को को संग्रहालय
जर्मनीबाट ल्याउन के हो?
ग्रीसका होटलहरू4ताराहरू सबै समावेशी छन्
रूसमा अगस्तमा आराम गर्न कहाँ जानुहुन्छ?
बिग बेन लन्डनमा
मल्लिया - लक्षणहरू
बाथरूम मा शेल्फ
लागूपदार्थको साथ cholecystitis को उपचार
किन खराब सपनाहरू छन्?
फिर्ता मांसपेशियों को स्पेस
मशरूम र मकईसँग सलाद
सपनाहरूलाई कसरी सम्झना छ?
शीतकालीन जूता रिकर
ब्राइडवे मा क्रिरा नाइटली को पहिलो शुरुआत
कैसीन प्रोटीन - यो किन आवश्यक छ र कुन खानेकुरामा यो समावेश छ?
नूडल्स ड्रेस - कसरि एक फैशन छवि बनाउन को लागी?
फैशनेबल चीज - शरद ऋतु 2015
डच पनीर - क्यालोरी सामग्री
बच्चा जन्मवाही पछि स्लिम
स्तनपान संग सेमेरा मासिक मासिक